VAKY BANTSILANA : Mampiditra angano ny dimbin’Ikotofetsy sy Imahakà… | NewsMada
Anisan’ny angano tena nanana ny toerany teo amin’ny Ntaolo ny anganon’Ikotofetsy sy Imahakà. Malaza amin’ireo hafetsifetsena sy fangalarana ary ireo karazana fahagagana miharo tetika ratsy izy roa lahy ireo. Iray amin’ireny ny ozona namonjen-tena. Lalan-tsaina nihazaran’Ikotofetsy sy Imahakà ny mifetsy zavatr’olona ka teo am-pangalarana voamandina no nifanenjehana. Raikitra ny famotorana, sesilany ny fandavana. Anisan’ny fomba nialana ny faniriana loza sy fanaovana ozona namonjen-tena. “Matesam-basy tokana aho”, hoy Ikotofetsy. “Vereza mbamin’ny taranaka fara aman-dimby raha naka ny voasary sy nianika ny tambohonao”, hoy Imahakà…
Fahizany ary hatramin’izao, noheverina sy ninoan-ko zava-marina izay ozona ventesina satria ny teny manan-jina ary izay irina sy tadiavina tsy maintsy ho tanteraka. Vokatr’izany, niriaria tamim-pahasambarana Ikotofetsy sy Imahakà na dia heverina aza fa mpametsifetsy sy mpangalatra gagilahy. Angano izany ka angano, saingy tsy nifarana hatreo akory ny tantaran’Ikotofetsy sy Imahakà fa tena be mpandimby ary bibilava fahafito natera-pahenina, mihoatra noho ny teo aloha, satria tena avo lenta be, na dia noheverina ho mirefarefa amin’ny tany aza. Tsy misy valaka amin’ny ozona namonjen-tena ny ataon’ny sasany amin’izao, na dia hita aza, fa izay mamafy rivotra tsy maintsy hijinja tadio…
Notaditadian’ny asan’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly ny sasany ka mitady hevitra fatratra ialana amin’ny valin-kasasarany. Mbola miantehitra fahagagana amin’ny herin-dRavola na dia raharaha tena mamoafady aza no notanterahina satria volam-bahoaka no nahodinkodina. Mifanindran-dalana eny ireo mpiray petsapetsa. Mikambankamban-dratsy tahaka ny boka? Mihevitra ny tenany hatrany ho tsimatimanota… Mbola miandrandra fahagagana tahaka ny “fahafahana vonjimaika” na dia tsy nandia teny amin’ny fonja mihitsy. Tena an’ny vola ny rariny eto an-tany na ny fitsarana tsy mitanila aza no namoaka ny didy?
Mbola miriaria any anaty fitondrana any ny dimbin’Ikotofetsy sy Imahakà, ary tena mampiditra angano. Efa tsinjon’ny filoham-pirenena ihany izy ireo, ary efa novakiany bantsilana fa “mpamosavy malemy”, nandritra ny kabary fifampiarahabana noho ny taona vaovao. Aiza ny fandraisana fepetra azy ireo? Ny sasany, tsy mitsahatra ny mifetsy amin’ny endriny marobe. Ireo fatra-pitsikera tamin’izany fotoana aza, tsy mahita vahaolana afa-tsy asa tsy mahavita taona amin’ny alalan’ny asa tanamaro. Mirehareha lozan-tany fa ampiakarina 5000 ariary ny karaman’ireo mpanao io asa io. Tena izay ve ny vahaolana ho an’ny firenena? Tsy sahy mihetsika mafy sa… Izay mangina volamena na omena vola dia mangina, amin’ity fahoriam-bahoaka.